Shir looga hadlayo qaxootiga qaaradda Africa oo maanta lagu soo gebagebeeynayo Adis’ababa – Radio Muqdisho
Shir looga hadlayo qaxootiga qaaradda Africa oo maanta lagu soo gebagebeeynayo Adis’ababa
Shir looga hadlayo dhibaatooyinka heysta qaxootiga Qaarada Afrika ayna ka qeybgalayaan wakiillo ka kala socda baarlamaanada Afrika ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gebagebeeyo magaada Adis’ababa ee dalka Ethiopia.
Kulankaasi ayaa waxaa Soomaaliya uga qeybgalay mudanayaal ka tirsan baarlamanka federaalka Soomaaliya, kuwaas oo madasha ka sheegay dhibaatooyinka qaxootiga Soomaaliyeed ku heysta wadamada deriska ah.
Xildhibaan Muuse Sheekh Cumar oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga xuquuqul Insaanka ee baarlmanka fedraalka Soomaaliya kana qeybgalaya kulankaasi ayaa sheegay iney ka hadleen dhibaatooyinka heysta qaxootiga Soomaaliyeed.
“dhibaatooyinka heysta barakacayaasha Soomaaliyeed waa mid la ogyahay haddeey tahay gabood fallada loogu geysanayo xeryaha, sida kufsiga, helitaanka raashinka biyaha iyo caafimaadka, haddey tahay daryeelka qoyska, arrimahaasi oo dhan waxey ka mid yihiin waxyaabaha an ka hadalnay” ayuu yiri mudane Muuse Sheekh Cumar.
Shirkan looga hadlayo dhibaatooyinka heysta qaxootiga qaarada Afrika ayaa kusoo beegmaya xilli maanta caalamka laga xusayo maamilta xuquuqda Aadanaha.
MUQDISHO: Ku-simaha guddoomiyaha Jaamacadda SIMAD oo la dilay